Safal Khabar - बालुवाटारमा आज ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक, के के छन् त एजेण्डा !
बालुवाटारमा आज ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक, के के छन् त एजेण्डा !
सोमबार, १२ जेठ २०७७, ०८ : १५
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक आज बालुवाटारमा बस्दैछ । हिजो दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाईएको बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यव्यस्तता देखाउदैं आजका लागि सारेका थिए ।
बैठक अहिले बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दैछ । नियमित बैठक भएकाले समसामयिक विषयमा छलफल हुने र सोही अनुसार निर्णय गरिने सरकारका एक मन्त्रीले बताए । आजको बैठकमा संसदमा निशान छाप संसोधनका लागि संसदमा दर्ता गराएको संविधान संसोधन प्रस्ताव, भारतसँगको सीमा विवाद, कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारी कदम लगायतका विषयमा छलफल हुनेछन् ।
त्यसका अतिरिक्त अन्य मन्त्रालयगत निर्णयहरु पनि आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हुन सक्ने ति मन्त्रीले बताए । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ यता मुलुक लकडाउन गर्दै आईरहेको छ । लकडाउन गरेपनि अहिलेसम्म ६ सय बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भईसकेको छ । अहिले सीमावर्ती भारतबाट नेपालीहरु स्वदेश फर्किने क्रम रोकिएको छैन । उनीहरु दिनुह हजारौंको संख्यामा नेपाल फर्किरहेका छन् ।
उनीहरुलाई स्वदेश भित्राएर कसरी ब्यवस्थित रुपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने लगायतका विषयमा पनि आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल हुन सक्ने बताईएको छ । सरकारले क्वारेन्टाइनको ब्यवस्थापन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को मापदण्ड अनुसार ब्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ ।
क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरु पनि भाग्ने क्रम बढेसँगै जोखिम पनि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले के कसरी विदेशबाट आएकाहरुको सुरक्षित क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आज छलफल हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय : संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजाने
सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले...
लकडाउन पूनः दुई हप्ता थप्ने तयारी, आजै साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक
कोरोनाका कारण एक सुत्केरी महिलाको निधन भईसकेको...
प्रधानमन्त्री ओलीको व्यस्तताले गर्दा २ बजे बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक ५ बजे सारियो
आज २ बजे बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक...
दिउँसो २ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक, लकडाउन एक साता थप्ने तयारी
सायद समितिले सिफारिस गरे अनुसार एक हप्ता...
१. जापानमा बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ५० पुग्यो, दर्जनौं अझै बेपत्ता
२. प्रदेश प्रमुख प्रसाई उपचार गर्न भरतपुर अस्पतालमा
३. टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा अमेरिका
४. गंगालालमा उपचाररत ७ जना बिरामीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
५. निजी विद्यालयको घुर्की : पैसा नपाए अनलाइन कक्षा बन्द गर्छौं
६. इन्डोनेसियामा ६.३ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प
७. नारायणी लिफ्टबाट पानी छाडियो
८. सस्तो मूल्यमा सामान पाइने भन्दै गरिएको ‘फेक विज्ञापन’को प्रलोभनमा नपर्न प्रहरीको अनुरोध
९. ‘इनफ इज इनफ’ अभियान र सरकार बिच १२ बुँदे सहमति, अनसन स्थगित